Wararka - Sidee baa nalalkaa caadiga ah loo qaabeeyey?
Nalalka qurxinta waxay leeyihiin xorriyad aad u weyn xagga naqshadeynta. Si ka duwan nalalka ganacsiga, ee leh ugaarsiga farsamo ee ugu dambeeya ee tayada indhaha, naqshadeynta nalalka qurxinta waxay xoogga saareysaa oo kaliya quruxda qaabka laambadda, laakiin sidoo kale jawiga saameynta iftiinka. Xaaladaha kala duwan ee dalabyada, naqshadeeyayaasha waxay badanaa xoogga saaraan qaabka ama optics-ka nalalka qurxinta. Sidaa darteed, marka la qorsheynayo laambad qurxin leh, naqshadeeyaha waa inuu haleelaa saamiga "qaab" iyo "iftiin".
1.Shape waa qaabka ugu weyn, nalka waa kaaliye
Laydhka gidaarka ee sawirka kore wuxuu leeyahay luqad naqshadaysan oo qaabkeedu yahay. Qaabka isku dhafan ee muraayadda jilicsan ayaa qariya isha iftiinka. Nalalka ayaa lagu dhejiyay derbiga. Kaliya maahan laambad darbi sida ay tahay qaab joomatari farshaxan.
2.Laydhku waa udub dhexaadka, qaabku waa kaabis.
Dhibcaha biyaha ayaa dhacaya - Momento chandelier group. Dhiirrigelinta Momento waxay ka timaaddaa muuqaalada dabiiciga ah: Dhibcaha biyaha ayaa si tartiib tartiib ah isugu soo ururaya xilliga ay fuulayaan, sida haddii ay nuugeen dhammaan iftiinka, oo ka tarjumaya goobta ku hareeraysan. Muraayadda dhalada ee Momento waa dhibic biyo ah oo qarka u fuulaysa. Il iftiin ka sarraysa ayaa ka sarraysa. Markuu iftiinku dhex maro "dhibicda biyaha", iftiinka waa la rogaa oo la kala firdhiyaa, oo wuxuu sameeyaa iftiin iyo halo madow oo dhulka ku taal, sida dhibic biyo ah oo ku soo dhacaya dusha biyaha deggan. Mawjadaha ku dul yaal waxaa ka buuxa madadaalo.
3.Form iyo iftiin dhinac ah.
Sidii aan ku sheegnay bilowgii, xorriyadda naqshadeynta nalalka qurxinta waa mid weyn. Marka lagu daro inay diiradda saaraan hal dhinac oo ah qaab iyo iftiin, naqshadeeyayaasha ayaa sidoo kale dheellitiri kara, isku milmi kara isla markaana is kaalmayn kara si wada jir ah
Sawirka kore, nashqadeeyaha ma uusan abuurin muuqaal olol leh, laakiin wuxuu isticmaalay giraan bir ah oo wareegsan oo khafiif ah si uu ugu habeeyo shaashadda kubbadda barafka qabow ee dhalaalaysa. Shaqadan farshaxanka ah, si isku mid ah u iftiiminaya kubbadda lampshade ee dhalaalaya ayaa ah jidhka ugu muhiimsan ee qaabka, jidhka ugu muhiimsan ee nalka, qaabka iyo iftiinka ayaa la isku daray.